निवर्तमान (Nibartaman) ||: November 2009
... त्यसैले राष्ट्रपतीय शासन
मुलुकको शासकीय स्वरुपको कुरा गर्दा एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जस्तो शक्तिशाली केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यो किनपनि आवश्यक छ भने, यदि सेरेमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था लागू गरियो भने केन्द्रमा दर्ुइवटा शक्ति केन्द्रको स्थापना हुने र शक्तिको लागि एक आपसमा प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखा पर्ने संभावना हुन्छ र विगतको प्रधानसेनापति प्रकरणमा देखिएको जस्तो द्वेधसत्ताकोस्थिति आउन सक्छ जसमा आन्तरिक तथा बाह्य पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुले एकलाई अर्काको विरुद्ध उक्साएर आफ्नो स्वार्थ पर्ूर्ति गर्न सक्छन् । भर्खरै मात्र सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भएको सर्न्दर्भमा यदि दर्ुइवटा शक्तिकेन्द्र हुने अवस्था रह्यो भने सामन्ती छानामुनि आश्रय खोजिरहेका प्रतिगामीहरुले कुनै एक शक्ति केन्द्रको ओत लागि टाउको उठाउने प्रयत्न गर्न सक्छन् । त्यस्तै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले पनि कुनै एक शक्ति केन्द्रलाई काखी च्यापी आफ्नो दूनो सोझ्याउने काम गर्न सक्छन् । तर शक्तिशाली केन्द्रको निर्माणसँगै कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था भयो भने द्वेधसत्ताको स्थिति र्टार्न सकिन्छ र सबैखाले आन्तरिक तथा बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध एकगठ भई जुध्न सकिन्छ । त्यसैगरी जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा राष्ट्रपति छानिने व्यवस्थाले जनताको र्सार्वभौमसत्ता पनि मुखरित हुन पाउँछ ।
प्रसव पीडामा छट्पटिएकी मेरी आमा
एउटा सुनौलो भविष्यको प्रतिक्षामा
हात ंपिmजाई चिच्याइरहेछिन्
तर दुष्ट जल्लादहरु, संगीन घोचिरहेछन् उनको कोमल देहमा
थियो त खाँचो केवल एक जोडी सुँडेनी हातहरुको
जसले स्वस्थ शिशु निकालिदेओस्
तर दुष्ट जल्लादहरु,
निचोरिरहेछन् मेरी आमालाई आफ्ना खुनी पञ्जाहरुले
भकुरिरहेछन् उनलाई आफ्ना रक्तरञ्जित बुटहरुले
उनको नवजात शिशुले
हटाओस् अन्धकार सबै
बालोस् नयाँ क्रान्तिको ज्योति
मुक्त गरोस् लाखौँ आमाहरुलाई दासताको जञ्जीरबाट
चाहन्छन् त्यो नवजात शिशुको भ्रुणनै सखाप पार्न
रक्त पिपाशु हातहरुले कत्लेआम गरी
परिवर्तन र अग्रगमनलाई रोक्न
मेरी आमाको सुकोमल अंगमा
संगीनका तीरहरु रोपिरहेछन्
ताकि उनको गर्भ नै तुहियोस् ।
त्यसैले झण्डा फेर्नुपर्छ....
आफूलाई प्रकाण्ड विद्धान मान्ने कतिपय कथित बुद्धिजिवी, लेखक तथा राजनीतिक कर्मीहरुले यो झण्डाले मुलुकलाई एकताको शुत्रमा बाँधेको र पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको कथित एकीकरण गर्ने सिलसिलामा यस झण्डालाई फहराएको हुँदा यो ध्वजालाई नै एकताको प्रतीक भएकोले यसलाई कुनैपनि हालतमा परिवर्तन गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । तर उनीहरुको यो विचार र अभिव्यक्ति त्यत्ति वैज्ञानिक र वस्तुसंगत देखिँदैन । एकपटक प्रयोग भएको वस्तु, चीज, संस्कृति र परम्परालाई कदापी परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताबाट ग्रसित यो विचारले संघीय गणतन्त्र नेपालको झल्को दिन सक्तैन । निश्चित रुपमा यो झण्डाले नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा त बोकेको होला तर यसले बढी भन्दाबढी निरंकुश राजतन्त्रको गाथा नै गाएको इतिहास छ । चन्द्र र र्सर्ूयवंशी राजाहरुले प्रचलनमा ल्याएको र पछि तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विजय यात्राको सम्झनास्वरुप राजतन्त्रलाई दर्ीघजीवन प्रदान गर्ने ध्येयले त्यही ध्वजालाई निरन्तरता दिएका हुन् न कि कुनै अमुक राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा । यो कसरी पनि पुष्टी हुन्छ भने जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका भनेर तल्कालीन लठैत इतिहासकारहरुले भ्रम फैलाएका थिए त्यसैगरी झण्डाको बारेमा पनि दरबारमा पालिएका इतिहासकारहरुले 'एकताको प्रतीकको' धोती ओढाइदिएका मात्र हुन् । र् वर्तमान राष्ट्रिय झण्डाले राजनीतिक परिवर्तनलाई पटक्कै सम्बोधन गर्दैन । यसले केवल सांस्कृतिक र धार्मिक महत्व मात्र बोकेको छ, त्यो पनि मात्र हिन्दू धर्म र संस्कृतिको अनि गाथा गाएको छ त केवल भद्दा निरंकुश राजतन्त्रको । कतिपय धार्मिक पण्डाहरुले यसलाई कथित आर्यहरुको पुरातात्विक सम्पदाको रुपमा पनि लिने गरेका छन् । त्यसकारण अहिलेको राष्ट्रिय झण्डाले नेपालीहरुलाई एकताको मालामा उन्छ भन्नु शाहवंशीय परम्पराको गुनगान गाउन खरीद गरिएका लठैत इतिहासकारहरुले फैलाएको भ्रम मात्रै हो । यो फगत आफ्नो गुनगान गाउन प्रचलनमा ल्याइएको ध्वजा मात्र हो । किनकि यसको निर्माणसँग श्रमजीवी नेपाली जनताको गोरु बेचेको साइनो छैन । समयको अन्तरालसँगै त्यसलाई दरवार निकटका इतिहासकारहरुले नुनको सोझो गर्न एकताको प्रतीकको धोती ओढाएका मात्र हुन् । र कतिपय मानिसहरु आज त्यही धोतीमा गुटुमुटु पर्दै यसलाई चलाउन हुन्न भनी पारम्परिक सोच र सामन्ती चरित्रको पर््रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फपरिवर्तनका संवाहक शोषित, पीडित, सीमांकृत, दलित, जनजातिहरु वर्तमान झण्डाले आफूहरुलाई समेट्न नसकेको भन्दै सो फर्ेर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यर्सथ, अब यो झण्डालाई व्यापक परिमार्जनसहित न्यायप्रमी जनताको ढुकढुकीमा बसाल्नु पर्छ ताकी जनताको परिवर्तन र अग्रगमनको चाहनालाई झण्डाले पनि प्रतिबिम्बित गरोस् । मनिकर निवर्तमान
आन्दोलनको कुरा .....
राजनीतिक सहमतिको लामो कसरत पछि अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । कार्तिक १५ गते साँझ मसाल जुलुससहित शङ्खनाद भएको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनलाई सरकारले भने बक्र दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा बसेको सुरक्षा पदाधिकारीहरुको बैठकले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसात्मक भएको भनी प्रचार गर्नुले प्रष्ट भएको छ । त्यसमाथि पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको माओवादी आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन समेत गर्न सकिने र्सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सरकार माओवादी आन्दोलनलाई दबाउन शाही सरकारकै बाटो अवलम्बन गर्न पनि पछि हट्दैन भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले आयोजित दबाबमूलक तथा प्रचारात्मक आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजक भएको अभिव्यक्ति दिएर सरकारले आफूलाई शाही सरकारकै कोटीमा दर्ज गरेको छ । शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले गानाबजानासहित गरिएको आन्दोलनलाई हिंसात्मक देख्ने सरकारी रवैयाबाट षड्यन्त्रको गन्ध नै आउँछ । नत्र सहमतिको रटान दिने सरकारले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । तर सरकार मौन छ, जस्तो कि मुलुकमा अमनचयन व्याप्त छ, कहीँकतै गडबडी भएकै छैन, र जुन गडबडी जस्तो देखिएको छ त्यो त बस् पानीको फोका मात्रै हो !
सामन्ती सांस्कृतिक चिन्तन
समाज परिवर्तनको महत्वपर्ूण्ा पक्ष हो सही र वैज्ञानिक सांस्कृतिक चिन्तन । तर हामी आज एक्काइशौं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा छलाङ्ग मारिरहेका नै किन नहोऔं, हाम्रो चिन्तन शैली अद्योपरान्त उही पुरातन र मूलत सामन्ती नै रही आएको छ । आज पनि हामीले जीवन र जगतका घटना तथा परिघटनाहरुलाई गतिशील र परिवर्तनशील प्रक्रियाको रुपमा बुझ्न सकेका छैनौं फलस्वरुप हरेक वस्तु, घटना र क्रियाकलापको पछाडी तर्क गर्नुको सट्टा अलौकिक र्'इश्वर'को रचनाको रुपमा सहजै स्वीकार गरेर बहसबाट पन्छिने गर्र्छौं । यसले हामीलाई फगत भाग्यावादी र्रर् इश्वरवादी मात्र बनाएको छ । यसरी कुनैपनि वस्तु, घटना र विचारको तार्किक ढंगबाट विश्लेषण गरी कारण र असरहरु खोज्नुको सट्टा त्यसलाई र्'इश्वरको लीला' वा 'भाग्यको खेल' मान्ने आम प्रवृत्तिले यथार्थको रहस्योद्घाटनमा तगारो उत्पन्न भएको छ । भौतिक रुपमा हामीले स्वतन्त्र मानव भै जन्म लिएका छौं । हामीसँग काम गर्ने हात खुट्टाहरु छन् र चन्तन मनन गर्ने मस्तिष्क पनि छ । तर हामीले आफ्नो मस्तिष्क कहिले पनि आफ्नो जीवन-दृष्टि खुट्टयाउनेतर्फपरिचालित गरेनौं । हामीले यसलाई प्रयोग गर्यौं त केवल धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा सदियौँ देखि चलिआएको रुढीवादी परम्परालाई 'बिरालो बाँध्ने' शैलीमा अंगिकार गरी कथित परम्परा धान्ने काममा । तिनै रुढीवादी आग्रहलाई आफ्नो जीवन-दृष्टि बनाउँदै आउनाले नै आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि हामी ऊँच, नीच, छुवाछुत, धामी झाँक्री, बोक्सी, भूतप्रेत, पिचास आदिमा समय गुजारिरहेका छौं । फलस्वरुप यही हाम्रो सभ्य कहलिएको समाजमा कति हजुरआमा, आमा, दिदी तथा बहिनीहरुलाई कथित बोक्सीको आरोपमा मानव मलमुत्र खुवाई चरम अमानवीय व्यवहार गरिँदैछ । उनीहरुलाई कुटपीट गरी जिउँदै जलाउनेसम्मको क्रुरता पर््रदशन भईरहेको छ तर हामी शिक्षित भनाउँदाहरु अवाक मुकदर्शक बनी थपडी पिटिरहेका छौं । र आफ्नो पाखण्डी कुरालाई साँचो प्रमाणित गर्न 'सत्ते राम राम, धरो धर्म' 'गाईको मासु खाने ....' जस्ता कसम र कीरिया खान्छौं । हाम्रो सत्यताको परिचय यस्तो ढोँगी र नौटंकी हुन्छ । कुनैपनि विचार, वस्तु, घटनाहरुको वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगबाट सोचेर, विचार गरेर निश्कर्षनिकाल्ने परिपाटी भएपो सत्यको रहस्योद्घाटन गर्न सकिन्थ्यो । झुठो, आडम्बरी र पाखण्डी सोच प्रणालीबाट के को सत्यको बोध हुन्थ्यो र -मनिकर कार्की 'निवर्तमान'
माइक्रोसफ्ट, जोन उड र शैक्षिक जागरण अभियान
मानिस सामाजिक प्राणी मात्र नभै जीवहरुमा र्सवश्रेष्ठ चेतना भएको प्राणी शास्त्रीहरुको भनाई वास्तवमै तथ्यसंग तब देखिन्छ जब मानिसले आफूभित्रको मानवता उजागर गर्छ । यसो भन्दा मानवइतरका प्राणीहरु चेतना शून्य र भावना शून्य हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन । निश्चित रुपमा अरु प्राणीहरुमा पनि भावना त हुन्छ नै तथापी तिनमा चेतना नहुनुुसक्छ । अझ मानवता भन्ने कुरा त चेतना भन्दा पनि अझ माथि हुन्छ । र पनि चेतना र मानवता एक अर्कामा अन्तर्निहित हुन्छन् । ग्लोबल भिलेजको अवधारणले संसारलाई एकदमै साँघुरो तुल्याइदिएको वर्तमान विश्व परिवेशमा हामी सबै समयको लाचार छाँया बनी आफूलाई घिच्याइरहेका छौं, जीवनको अन्त्यतिर । सबै सबै यत्रतत्र छरिएका अवसरको खोजीमा तँछाडमँछाड गरी लागिपरेका छन् । उपभोक्तावादको संास्कृतिक माहौलमा जन्मिएका र हर्ुर्किएका हामी त्यो भन्दा माथि उठेर आफूभित्रको मानवीयता प्रकट गनै अर्समर्थ मात्र छैनौं । यसको लागि न त हामीलाई फर्ुसद नै छ नत इच्छा नै ।
धनसम्पत्ती, भौतिक सुख र भोग विलासलाई सफलताको व्यारोमिटर मान्ने हाम्रो समाजले व्यक्तिलाई पर्ूण्ारुपमा आत्मकेन्द्रीत बनाई अवसरवादको दास बनाएको छ । त्यसैले त मानिस अवसर वा करियरको पछि दौडन्छ र समग्र परिवार, समाज र राष्ट्रभन्दा पृथक भएको नक्कल गर्छ । सूचनाप्रविधिमा आएको क्रान्तिले मानिसलाई आत्मकेन्द्रित सोचाइतिर उन्मुख बनाएको त छ नै उसलाई समाज, परिवार साथीभाइ भन्दा टाढै रही घन्टौं कम्प्यूटरमा खेल्ने आदत परिसकेको हुन्छ । त्यस्तै निर्वाध रुपमा हेरिने यौन उत्तेजक वेवसाइटहरुले समाजालाई विकृतिको श्रृङ्खला तर्फउन्मुख गराएको छ र यसले महिलामाथि हुने यौन हिंसालाई प्रश्रय दिएको छ । यी र यस प्रकारका परिघटनाबाट ग्रसीत आजको युवापुस्ताले समाज र राष्ट्रको लागि कमै समय दिन सक्छ । त्यसमाथिपनि समग्र मानव जातिको उत्थानका लागि केही नौलो आयामको समुद्घाटन गर्ला भनेर आश्वस्त हुने कमै दृष्टान्तहरु भेटिन्छन् । यस्तै कम दृष्टान्तहरु मध्ये कर्पोरेट संसारका हस्ती माइक्रोसफ्टका जोन उडले गरेका छन् ।
अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रका एक सम्पन्न नागरिक जो माइक्रोसफ्ट जस्तो संसारकै प्रतिष्ठित कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका रुपमा कार्यरत थिए, उनी विश्वका विपन्न समुदायका बालकालिकामा शिक्षाको ज्योति फैलाउने दृढ अठोटका साथ आफ्नो काम, नाम र दाम सबै छाडी धोक्रा भरी पुस्तक बोकेर हिंडे । अमेरिका जस्तो चरम् व्यक्तिवादी मुलुकमा जन्मिएका, त्यसमाथि पनि माइक्रोसफ्ट जस्तो संस्थाका उच्च अधिकृतलाई के नपुग्दो थियो, कि उनी धोक्रामा पुस्तक बोकी हिंड्नुपर्ने थियो । उनले यो सब मानवजातीको उत्थानका लागि गरे । आफूलाई भौतिक सुखसयलबाट टाढा राखी शिक्षाको ज्योति फैलाउन अनिश्चयको यात्रा तर्फलम्किने उनको मुक्तकण्डले प्रशंसा गर्नैपर्छ । हो तिनै मानवतावादी हृदयका अमेरिकी नागरिक जोन उडले शिक्षाका माध्यमबाट संसार बदल्ने अठोटका साथ 'रुम टु रिड' अभियानमार्फ संसारका अति कम विकसीत मुलुकहरुमा आफ्नो परोपकारी अभियानलाई थालनी गरेको कुरा तबमात्र थाहा भयो जब उनले आफ्नो अभियानको ८ वर्षो अनुभवलाई आफ्नो पुस्तक 'लिभिङ माइक्रोसफ्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड'मा लिपिबद्ध गरे । यसलाई आफ्ना शब्दशिल्पी हातहरुले नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रगतिशील लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नेपाली पाठकलाई लाउनुसम्मको गुण लगाए । पुस्तकलाई मौलिक कृतिको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सर्न्दर्भमा उनले ठ्याक्कै नेपाली नाम पनि जुराए 'माइक्रोसफ्ट देखि बाहुनडाँडासम्म' ।
नेपाल लगायत विश्वका अति कम विकसित र युद्धले ग्रस्त आधादर्जन मुलुकहरुको भ्रमण गरी उनले आफ्नो 'रुम टु रिड' अभियान मार्फ शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको परोपकारी अभियानले करिब १४ लाख पुस्तकहरु वितरण गरिसकेको छ भने करिब ६ हजार जति पुस्तकालय निर्माण गरी ४ हजार बालबालिकाहरुलाई माध्यामिक विद्यालयसम्मको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । उनको परोपकारी अभियानले श्रीलंकामा सुनामी आँधीपछि क्षत्रि्रस्त विद्यालयका भवनहरु पुननिर्माणमा सहयोग गरेको थियो ।
यो हाम्रो लागि लज्जाबोध हो किनभने एउटा विदेशी खैरेले धोक्रामा पुस्तक बोकेर हाम्रा नानीहरुलाई शिक्षा दिन आउनुपरेको छ । ऊ निःस्वार्थ भावनाले सेवा गर्न नेपाल आउँछ र दुरदराजका विकट विद्यालयहरुमा पुस्तकालय स्थापना गरी बालबालिकाहरुलाई पुस्तक पढ्ने वातावरण बनाइदिन्छ तर हामी शिक्षित भनाउँदाहरु आकाशपातालका गफ चुटी -अझ टुटेफुटेको अंग्रजी मिर्साई) साइबर क्याफे र बेकरीहरुमा हल्लिरहेका हुन्छौं । हामी आफूहरुलाई आधुनिक भएको भन्ठान्छौं तर आफ्नै नाकैमुन्तिरको गरिबी, अशिक्षा र उत्पीडनलाई देखेनदेखेझैं गर्र्छौं ।
हामी बालअधिकारको चर्काचर्की बहस गर्र्छौं । तर आफ्नै घरमा बालश्रमको प्रयोग भएको देखेनदेखे झैं गछौर्ं । यी र यस प्रकारका बेथितिहरुको अन्त्य नभएसम्म नयाँ नेपालको कुनै गुञ्जायस नै छैन । हो शिक्षा नै नयाँ नेपाल निर्माणको दरिलो र बलियो आधार भएकाले जोन उडको यो अनुकरणीय कामबाट प्ररित भई गगन थापाले 'एजुकेशन फस्ट' अभियानको अवधारणा ल्याउनुभयो । उहाँले र्सार्वजनिक रुपमै आफूले मासिक रु. १००० सो अभियानलाई प्रदान गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । गगन थापाको यो अभियानलाई र्सार्थकतातर्फडोर्याउने उद्देश्यले देशव्यापीरुपमा विभिन्न अभियानहरु शुरु भएका छन् । कसैले आफ्नो घरमा खुत्रुके राखेर अभियानलाई सहयोग गर्न अर्थ संकलन गरेका छन् त कसैले 'शिक्षाका लागि रु. १' जस्ता नामले यो महान् परोपकारी कामको थालनी गरेका छन् । यसैको एउटा कडीस्वरुप हामीले पनि एउटा अभियान शुरु गरेका छौं । त्यो हो 'शैक्षिक जागरण अभियान' । आर्थिक दुरावस्थाका कारण पाठ्यसामग्रीको अभावमा पढ्नलेख्नबाट बञ्चीत बालबालिकाहरुलाई पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बुटवल फाइनान्स लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बुटवलमा एउटा अक्षयकोष खडा गरी अभियानको थालनी गरेका छौं ।
निश्चित रुपमा हाम्रा आम्दानीका स्रोतहरु सिमीत छन् । हामीले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सक्तैनौं । तथापी खर्च कटौति गर्न सक्छौं । हामीले आफूले गर्ने खर्चमा दैनिक रु.१ ले कटौति गरी यो अभियानलाई सहयोग गरौं । यसका लागि समस्त पाठकवृन्दलाई हाम्रो अभियानको तर्फाट के आव्हान गर्न चाहन्छौं भने तपाईंहरुको सानो सहयोगले ती कलिला बालबालिकाले शिक्षाको अवसर पाउनेछन् । चेतनाको ज्योति बाँड्ने महान् कार्यमा सहभागि बनी मानवताको परिचय दिऔं ।
मनिकर कार्की -निवर्तमान)
पुस्तकालय, म र मार्क्सवाद
बिहान कर्ीर्तिपुर जाने कार्यक्रम तय भएको थियो । धेरै समय पहिले अखबारमा पढेको थिएँ कि एक जना मानिसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्ताकालयमा बिगत ७/८ बर्षेखि मार्क्सवादको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनलाई भट्ने मेरो धोको आज पूरा हुनेवाला थियो । काठमाडौको त्यो छोटो बर्साई हतारमा नै बित्दै थ्ाियो र पनि केही नयाँ अनुभव गर्ने लालसाले छोडेको थिएन । बिहान सबेरैै झोलामा आफ्ना अत्यावश्यकीय सामान र कागतपत्रहरु राखेर चैतको चीसो सिरेटोलाई छिचोल्दै कर्ीर्तिपुर तर्फहुइकिएँं । कर्ीर्तिपुर पुगेर साथीभाइहरु सित भेटघाट गर्ने काम भयो । लामो समयपछिको भेटघाट भएकोले छलफल केही लम्बिनु पनि स्वभाविक नै थियो । कुराकानी कै क्रममा ग्रामीण भेकका पढ्नबाट बञ्चित बालबालिकाहरूलाई पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराउने हेतुले "शैक्षिक जागरण अभियान" शुरु गर्ने सोचमाथि छलफल र विचारविमर्श भयो । साथीहरूले यसलाई सकरात्मक रूपमा लिंदै निकट भविष्यमा नै यसलाई अघि बढाउने बचनबद्धता दिनुभयो । यस अभियानको बारेमा विस्तृत कुरा आगामी अंकहरूमा लेख्नेछु ।
बिहानको खाना खाइसकेपछि म उहाँहरूबाट छुट्टएिँ र केन्द्रीय पुस्तकालयतर्फहान्निएँ । पर्ूव निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एकजना पर्ूव सहपाठी मित्र र अर्का अपरिचित मित्रसँग भेट हुने र तीनै जना पुस्तकालयमा जाने योजना थियो । त्यसै अनुरूप म हतारहतार पाङ्गा बसपार्कमा पुगें । केही छिनको पर्खाइपछि उहाँहरू आउनुभयो र अपरिचित मित्रसँग भलाकुसारी भयो । अनि हामी तीनै जना विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको केन्द्रीय पुस्तकालयतर्फलाग्यौं । हिँड्दै जाँदा छेवैको दोबाटोमा केही युवा जमात टायर गुडाउँदै आए । टायर र केही झण्डा देख्ने वित्तीकै सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कि अब चक्का जाम हुँदैछ । नभन्दै विद्यार्थीहरुको एक घण्टे चक्काजाम कार्यक्रम शुरु भयो । केही बेरको छलफल र भेटघाट पश्चात् मलाई पुतलीसडकमा पुगेर आफ्नो काम फत्ते गर्नुथियो । त्यसकारण पनि म अलि हतारमा नै थिएँ । अब बन्दै भएपछि के नै लाग्यो र भन्दै पुस्तकालयतर्फलाग्यौं ।
विश्वविद्यालयको यो मेरो प्रथम भ्रमण नै थियो । विश्वविद्यालयमा आवतजावत गर्ने विद्यार्थी एवम् प्राध्यापकहरूको लर्कोतर्फनजर दौडाएँ । यो अनुभव मेरा लागि एकदमै नौलो थियो । कतिपय युगल जोडीहरु हातमा मोटामोटा पुस्तक बोकेर गप्पिmदैं हिंडेका थिए । त कतिपयका अनुहारमा चिन्तन र चिन्ताका रेखाहरु पनि प्रष्टै पढ्न सकिन्थ्यो । मोटरसाइकलमा प्वांक प्वांक हर्न बजाउँदै हुँइकिने प्र्राध्यापकहरु भने केही हतारमा भए जस्ता देखिन्थे । पुस्तक पसल र चिया पसलको अगाडी झुम्म परेर बसेको समूह भने राजनीतिक गफमा मस्त देखिन्थे । विश्वविद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरु मध्य कतिपय भने साह्रै 'फेशनेवल' लाग्यो । ती भने सबैका आकर्षाका केन्द्र बन्ने रहेछन् । त्यस्तै आफूलाई आधुनिक भन्न रुचाउने जटाधारी युवाहरु पनि आआफ्नो समूहमा बसी गफ गरिरहेका देखिन्थे । समग्रमा ती सबैको अनुहारले फरकफरक भावार्थ प्रकट गरेको थियो । नयाँ ठाउँ, नौलो परिवेश र नौला अनुहारहरुको अध्ययन गर्नु मेरा लागि भने अवसर नै थियो ।
पुस्तकालयको शान्त र ठूलो भवन प्रवेशद्वार कलात्मक बुट्टेदार थियो । भित्र छिर्ने बित्तीकै आफ्नो झोला त्यहीँ छाडेर जानुुपर्ने पुस्तकालयको नियम अनुसार मैलेपनि एउटा डायरी, केही कागजहरु र पुस्तक झिकेर झोला राखिदिन आग्रह गरेँ । अब हामी पर्ूण्ारुपमा पुस्तकालयको हाताभित्र प्रवेश गरिसकेका थियौं । पत्रपत्रिका, दर्शन, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कला र साहित्य, समाजशास्त्र लगायतका विविध खण्डहरुमा असंख्य पुस्तकहरु राखिएका थिए । लाग्दथ्यो, सबै पुस्तकहरुले पाठक पर्खेर बसेका छन् । केही मानिसहरु असंख्य पुस्तकहरुको रासबाट आफूलाई पठनीय लागेका पुस्तक खोजिरहेका थिए । कोही समूहगत रुपमा त कोही एक्लै । सबैको आआफ्नै अध्ययनको विषय र क्षेत्र भएर नै होला सबैजना आआफ्नो रुचि मूताविकको पाठ्य सामग्री खोजिरहेका थिए । तर मैले भने केवल र्याकमा सजाइएका पुस्तकहरु सरर्सर्ती हर्ेर्ने काम मात्र गरें । किनकि मसँग कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने पर्ूव योजना नै थिएन । एक घण्टाको बसाइ पछि १ घण्टे चक्काजाम खुल्नासाथ मलाई अफिसतिर दौडनुपर्ने थियो ।
हामी दोस्रो तल्लामा प्रवेश गर्यौं । 'सोधपुछ' लेखिएको कार्ड झुण्डिएको खण्डमा केही मानिसहरू थिए । छेवैमा नगद काउन्टर थियो । पुस्तकालयको सदस्यता दर्ता, नविकरण जस्ता प्रशासनिक काम त्यहाँबाट हुने रहेछ । त्यसको छेवैमा कम्प्यूटर ल्याब थियो, जहाँ इमेल इन्टरनेटको सुविधा रहेछ । त्यूनतम शुल्कमा संचालन गरिएको ल्याबले विशेषगरी अनुसन्धानमा लागेका विद्यार्थीहरुलाई निकै सहयोग पुगेको मेरो ठम्याई थियो । त्यसपछिको अर्को विशेष कक्षमा भने पाठकहरु पर्ूण्ारुपले शान्त रही अध्ययन गर्दा रहेछन् । त्यहाँ अध्ययनमा बसेकाहरु सबै टाउको निहुराएर गहिरो अध्ययनमा लिप्त थिए ।
हाम्रो तीनजनाको समूह सरासर त्यो कक्षमा पस्यो । दर्ुइवटा टेबुल र एउटा कर्ुर्सर्ीीएको क्याविनमा एकजना अधबैंशे मानिस घप्लक्क परेर बसेका थिए । वरिपरिका टेबुल पुस्तक र अखबारको चाङले भरिएको थियो । 'न्यूयोर्क टाइम्स' देखि 'द काठमाडौं पोष्ट' सम्मका पत्रपत्रिकाका विशेष शर्ीष्ाकहरुमा रातो मसीले हाइलाइट गरिएका थिए । त्यस्तै रंगीबिरंगी कलमले हाइलाइट गरिएका पुस्तकहरु पनि अनगिन्ती थिए । टेबुलमा डायरी र कागजका पानाहरु पनि थिए । पुस्तक र अखबारका पृष्ठहरुमा हतार हतार तीक्ष्ण आँखा दौडाउँदै उनी केही टिपोट गरिरहेका देखिन्थे । सेतो 'पीक्याप' मा ठाँटिएका, अग्ला कदका, कैला आँखा भएका हर्ेदा 'विदेशी खैरे' जस्ता देखिने 'गंगा प्रसाद चौधरी' लाई पहिलोपटक देख्दा जोकोहीलाई पनि उनी नेपाली हुन् भनेर विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । एकछिन त म पनि झुक्किएँ। तर मेरा मित्रले उहाँसँग केही समय मागेपछि भने मलाई विश्वास भयो कि उनी नेपाली नै रहेछन् । उनले पनि सहजताका साथ समय दिने भनेर फटाफट बाहिर निस्किए । त्यो विशिष्ट कक्ष अध्ययनका लागि भएकाले त्यहाँ चर्को आवाजमा कोही पनि बोल्न नहुने रहेछ । त्यसैले होला उनी फटाफट बाहिर आएर केही मिटर टाढा राखिएका कर्ुर्सर्ीीेखाउँदै आफूपनि कर्ुर्सर्ीी बसे । शुरुमा परिचय आदानप्रदान भयो । परिचयको क्रममा उनले आफ्नो नाम बताए र आफू महोत्तरीको भएको पनि जानकारी दिए र विगत ८ वर्षदेखि मार्क्सवादको अध्ययनमा लागेका उनले मार्क्सवादको गहिरो अध्ययन गर्न निकै कठीन रहेको पनि बताए । उनी एक मार्क्सवादी अध्येता भएको नाताले मैले मार्क्सवादका सैद्धान्तिक प्रश्नहरु राखेँ । उनी धाराप्रवाह मार्क्सवादका अंशहरुको वर्ण्र्ाागर्न लागे । 'मानिस जन्मसिद्ध स्वार्थमा जेलिएको हुनाले स्वार्थबाट माथि नआएसम्म द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विजारोपण हुन सक्तैन' उनको भनाइ थियो । मार्क्सवादलाई अर्थ्याउने क्रममा उनको भनाइ थियो 'मार्क्सवाद परिवर्तनको विज्ञान हो जसले विविध रुपका शोषण, उत्पिडनलाई विस्थापित गरी नयाँ संरचनाको निर्माण गर्छ' । मार्क्सवादलार्इर्र्बुझ्न कठीन भएको बताउँदै भने 'मानिस पुरातनवादी चिन्तनमा जेलिएको हुनाले मार्क्सवाद बुझ्न सक्तैन' । यसै सर्न्दर्भमा मार्क्सवादका तीन संघटक अंकहरु १) द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद २) राजनीतिक अर्थशास्त्र र ३) वैज्ञानिक समाजवादको पनि छोटकरीमा अर्थ्याउने प्रयास गरे । यस सम्बन्धी बहस आगामी अंकहरुमा गर्नेछु ।
आफ्नो अध्ययनको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै उनले मार्क्सवादको गाठ्ठी कुरो बाहिर ल्याउने हेतुले यसको अध्ययनमा लागेको बताए । 'हरेक वस्तु र घटनाको कारण जान्ने विधा नै मार्क्सवाद भएको हुनाले कारणको निषेध गरिनुहुन्न' भन्ने उनको तर्क थियो । मार्क्सवादलाई बुझ्न उनको प्रथम पुस्तक 'पुरूषवादी सत्ता -मानसिकता) विरुद्ध एक हस्तक्षेप' पढ्यो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छन् । आगामी दिनहरुमा उहाँबाट यस्तै प्रकारका पुस्तकहरु पढ्न पाइयोस् । मार्क्सवाद सामान्य शोषित, पीडित, मजदुर, किसान लगायतका गरिखाने नागरिकको दर्शन भएकाले यसको अध्ययन गरिनर्ुपर्छ । र मार्क्सवादलाई सरल र सहज रुपमा बुझिने भाषामा व्याख्या गर्न गंगा प्रसाद चौधरी जस्ता अध्येताले अहम् भूमिका खेल्नर्ुपर्छ । उहाँको सफलताका लागि शुभकामना !